Ururka Baradhada - majaladda "Nidaamka Baradhada"
Bogga guriga Calaamadda Ururka baradhada
Calaamadda: Ururka baradhada
Magnit iyo Ururka Baradhadu waxay abuureen madal ay kula shaqeeyaan alaab-qeybiyeyaasha
Magnit iyo Ururka Baradhada, oo ay ku midaysan yihiin in ka badan 90 ka qaybgalayaasha suuqa baradhada iyo khudradda Ruushka ee Kaliningrad ilaa Territory Krasnoyarsk, ayaa ku heshiiyey ...
Sahan ku saabsan iibsashada bacriminta macdanta xilliga cusub. natiijooyin
Diseembar 6, goobta kanaalka telegram ee majaladda Nidaamka Baradhada, kulan ay leeyihiin khubaro ka socota Ururka Baradhada oo ay la socdaan kaqeybgalayaasha suuqa baradhada ayaa ka dhici doona. Xaruntii doodda...
Fiiro gaar ah! Kulanka “Saacadda Ururka Baradhada” ayaa la qaban doonaa 6-da December
Kulanka labaad ee la qorsheeyay oo ay lahaayeen khubarada Ururka Baradhada oo ay la yeelanayaan beeralayda baradhada goobta kanaalka telegram ee majaladda "Nidaamka Baradhada" ayaa dib loo dhigay 6-da Disembar. Bilowgii munaasabadda...
Ka doodista amarka qabyada ah "Marka la ansixiyo qaddarka ugu badan ee kharashka shaqada 1 hektar"
Wasaaradda Beeraha ee Ruushka ayaa diyaarisay amar qabyo ah "Marka la ansixiyo xajmiga ugu badan ee kharashka shaqada 1 hektar ee dhulka dib loo soo celiyay, iyo cabbirka ugu badan ...
Ururka Baradhada: Maalgelinta warshadaha waxay noqon doontaa faa'iido saddex sano gudahood
Maalgelinta warshadaha baradhada waxay noqon doontaa mid faa'iido leh laba ilaa saddex sano, oo ay ku jirto taageerada gobolka ee tan ...
Saacada Midowga Baradhada
Ururka Baradhadu waxa uu kulamo xiriir ah la furaa beeralayda baradhada goobta kanaalka Telegram-ka Beeraha. Kulamadan ayaa lagu gorfayn doonaa arrimaha la xidhiidha dhinaca warshadaha, iyo mid kasta oo...
Natiijooyinka shabakada internetka ee Ururka Baradhada
Webinar-ka toddobaad ee Ururka Baradhada ayaa soo ururiyay in ka badan 100 qof. Bilowgii webinar, agaasimaha fulinta ee ururka baradhada Alexey Krasilnikov ayaa la wadaagay macluumaadka ku saabsan ...
Alaabta beeruhu waxay ka tagi karaan suuqa baradhada iyo khudradda Ruushka
Sergey Lupekhin, oo ah guddoomiyaha ururka ka qaybgalayaasha suuqa baradhada iyo khudaarta, ayaa sheegay in soo saarayaasha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ay ka bixi karaan xilli ciyaareedka soo socda ...
Saaxiibada qaaliga ah! Xafiiska Ururka Baradhadu waxa uu helay codsi (warqad ku taariikhaysan Sebtembar 24.09.2021, 81031 No. ТН / 21/XNUMX) ee FAS Russia si ay u bixiso macluumaad gooni ah oo ku saabsan ...
Ururka Baradhadu wuxuu sameeyay codbixin ka dhex dhacday akhristayaasha kanaalka telegram -ka "Digest of the Potato System" magazine, oo loogu talagalay iibinta bacriminta macdanta ee is -weydaarsiga saamiyada. Waxaan ku siinaynaa ...